17 Xiddig Oo Seegi Kara Koobka Adduunka Russia 2018. – Kooxda.com
Home 2018 March France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta 17 Xiddig Oo Seegi Kara Koobka Adduunka Russia 2018.
17 Xiddig Oo Seegi Kara Koobka Adduunka Russia 2018.
March 17, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Waxa ay kaliya 2 bilood inaga xigaan markii ay tababarayaasha xulalka ka qayb galaya koobka adduunku gudbin lahaayeen liiska xiddigaha uga qayb galaya koobka adduunka.
Waxa jira xiddigo waaweyn oo khatar ugu jira in ay seegaan ka qayb galka kooxda Adduunka Russia 2018 kuwaas oo ay sabab u tahay arimo kala duwan oo ay ugu weyn tahay si joogto ah oo ayna ugu ciyaarin kooxohoodu.
Xulka Brazil ayaa koobka adduunka galaya iyaga oo mar kale ka mid ah xulalka ugu cad-cad waxa ay ka tagi karaan xiddiga David Luiz kaas oo waayay booskiisa Joogtada ah ee chelsea sidoo kale si la mid ah xiddiga kooxda Man city ee Danilo waxa ay sidoo kale su,aal ka taagantahay taam ahaanshaha Neymar.
Waa xul kale oo ka mid ah xulalka sida weyn ugu cad-cad koobk adduunka waxana waayi karaan xiddigo badan oo ay ka mid yihiin Manuel Neuer oo dhaawac ah,Gotze,Reus iyo Weigl kuwaas oo aan la hubin in ay raaci doonaan xulkooda.
Waxa jira xiddigo badan oo seegi kara xulka Tababare Sampoali isaga oo aan ilaa haatan garanayn shaxdiisa ama xiddigihiisa ugu fiican liiskii ugu dambeeyay ee uu soo saaray ayay ka maqan yihiin xiddigaha Dybala,Icardi,Pastore & Rulli.
Waxa sanad walba wax weyn laga fishaa England koobka adduunka xiddigihii ugu dambeeyay ee liiska xulka qaranka England seegay ayaa ka mid ah Cahill,Sturridge iyo Kane oo dhaawac ku seegay.
Xulka difaacanaya koobka Yurub ah xul aan xiddigo badan ka maqnaan dooni laakiin waxa si weyn loo filayaa in laga reebo xiddigaha Nani, Eder, Pepe & Renato Sanches.
Waa xulkii Kala bixi koobka adduunka reebay Itlay waxana laga yaabaa in uu ka maqnaado xiddigooda Ibrahimovic xiddiga ayaa horay uga fariistay xulka qaranka Laakiin waxa si weyn loo hadal hayaa in uu midkan noqon doono kii ugu dambeeyay ee uu koob adduun ciyaaro.
Facebook Ku Dhiibo Aragtidaada Ama Qeybta Hoose
Filed in: France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta
Gili Kooxda Aad Taageerto